Realme Narzo 30 5G vs Realme GT 5G: nyocha doro anya | Gam akporosis
Onyeka Onwenu | 28/06/2021 12:02 | Mobiles
Onye Asia na-emepụta Realme eguzobewo kemgbe ọtụtụ afọ dịka otu n'ime ụdị ndị kachasị mkpa, na-enye ụdị dị iche iche na ọnụahịa ezi uche dị na ya. Ihe nlere nke dara ada na ugwo site na June 16 rue 25 na AliExpress Ọ bụ Realme Narzo 30 5G, smartphone nke na-arụ ọrụ zuru oke na ụdị ngwa na egwuregwu niile.
Anyị na-echetara gị na ị nwere ike zụta ebe a Realme Narzo 30 5G na ọnụahịa kacha mma.
Narzo 30 5G bụ nsụgharị akụ na ụba ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere Realme GT 5G, ha bụ ngwaọrụ abụọ nwere otu njikọta, ọ bụ ezie na ọdịiche dị na ọtụtụ nkọwa, gụnyere obi ya. Nzube nke ụdị abụọ ahụ kpachapụrụ anya, ha nwere otu interface na sistemụ arụmọrụ.
1 Realme Narzo 30 5G na Realme GT 5G
2 Igwefoto ihu na ihu
3 Batrị, akụkụ dị mkpa
4 Ekwentị Njikọta
7 Nnweta na ọnụahịa
Realme Narzo 30 5G na Realme GT 5G
Ihe dị iche na Realme Narzo 30 5G na Realme GT 5G na-amalite site na panel ha gbagoro, nke mbụ bụ LCD 6,5-inch na mkpebi Full HD + na ọnụọgụ ume 90 Hz, nke abụọ bụ 6,43-anụ ọhịa AMOLED (Full HD +) na 120 Hz ume ọhụrụ. Ha abụọ gbakwunyere igwefoto n'ihu oghere na imewe mara mma na ha abụọ.
Ihe nhazi nke ụdị abụọ ahụ sitere n'aka onye nrụpụta dị iche, Narzo 30 5G na-agbado MediaTek Dimensity 700, mgbawa nwere ike ịrụ tupu ọrụ ọ bụla nke ngwa na egwuregwu, GT 5G na-ejikọ Snapdragon 888 dị ike dịka ọkọlọtọ. Na mpaghara eserese, MediaTek na-agbakwunye Mali-G57 MC2 GPU, mgbe Qualcomm na-akwagide Adreno 660 dị ike, na arụmọrụ dị egwu mgbe ị na-eji ngwa dị iche iche na egwuregwu ọhụụ.
Akụkụ ọzọ ịkọwapụta bụ nke ncheta na nchekwa, Realme Narzo 30 5G na-abịa otu nhọrọ RAM nke ruru 4 GB, Realme GT na-enye atọ, yana 6, 8 wee rue 12 GB. Ugbua na nchekwa ihe yiri nke a na - eme, Narzo 30 na - anọgide na nhọrọ 128 GB (nke MicroSD gbasaa) na GT na nhọrọ 128 na 256 GB, nke MicroSD nwekwara ike ịgbasa.
Igwefoto ihu na ihu
Na azụ ekwentị abụọ ahụ na-arịgo anya atọ, ihe dị iche na-eme na ọnụ ọgụgụ nke megapixels na otu na nke ọzọ. Igwefoto kachasị nke ụdị Realme Narzo 30 5G bụ 48pipixels, nke abụọ bụ macro 2 MP na nke atọ bụ 2 megapixel monochrome.
Gafe na kamera azụ nke Realme GT, nke mbụ bụ megapixels 64, nke abụọ bụ 8 megapixel n'obosara na nke atọ a 2 megapixel nnukwu, ihe inyeaka dị mkpa. Ugbua n'ihu Realme Narzo 30 5G Ọ bụ megapixels 16, dị ka ọ dị na Realme GT, nke bụ ihe mmetụta nwere otu nọmba megapixels, zuru oke maka iji foto na vidiyo dị mma.
Batrị, akụkụ dị mkpa
Otu n'ime ihe ndị ka mma na oge bụ obodo kwụụrụ ekwentị, ihe ndị na - eri ngwa ahịa na - enwe ekele maka ya. Realme Narzo 30 5G rutere 5.000 mAh, nke ga-ezu maka ihe karịrị otu ụbọchị ọrụ, Realme GT tụbara na 4.500 mAh.
Otu nke Narzo 30 dịka ọmụmaatụ ghọrọ ụgwọ ngwa ngwa nke 18W, ibu ahụ na-abụkarị ihe dị ka minit 50 site na 0 ruo 100%, oge nke dị elu. Realme GT nwere ihe ngwa ngwa 65W, na-ebugharị smartphone na obere ihe dị ka ọkara elekere site na 0 ruo 100%, na ịbụ otu n'ime ngwa ngwa na ahịa dị ugbu a.
A ga-anabata njikọ niile na ekwentị, ebe ọ bụ na ọ dị mkpa ịnwe ike ịbanye na thentanetị, na ngwaọrụ, nyefee data na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Realme Narzo 30 5G gụnyere 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, Dual SIM na ntinye okwu minijack.
Otú ọ dị, Realme GT na-agbakwụnye otu njikọta, 5G (Dual), Wi-Fi 6 (oke ọsọ na nke a), Bluetooth 5.2, NFC na GPS abụọ. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na GT bụ ekwentị amapụtara nke ọma ma a bịa na njikọta ọsọ ọsọ, ọkachasị n'ụdị njikọ ọ bụla.
Ha anaghị adị iche mgbe ọ gbasara ịwụnye sistemụ arụmọrụ, Ha abụọ tinye gam akporo 11 n'okpuru ihe nkpuchi nke Realme UI 2.0, otu n'ime oyi akwa nke na-emeziwanye n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya. Realme na-enwe ọganihu dị ukwuu na ya, na mgbakwunye na ịgbakwunye ọtụtụ nhọrọ iji soro ndị ọzọ dị ka MIUI ma ọ bụ EMUI.
Fluency na-abụ mgbe eji ego nke na ebe nchekwa nke ọ bụla mobile, ihe atụ na Realme Narzo 30 5G nwere modul 4 GB maka 6, 8 na 12 GB na Realme GT. Mfe ahụ yiri nke ahụ, dị oke mkpa na enwere ọtụtụ ndị injinia na ndị mmepe n’azụ oyi akwa n’oge ahụ.
Ihe nrịba ama nke Realme Narzo 30 5G na-akụ na ihe eji eme ihe, nke yiri ekwentị ndị ọzọ nke ika ahụ, ya na panel ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihuenyo niile, belụsọ akụkụ ala ebe bezel na-ahụ anya. Igwefoto dị n’ihu nwere oghere, ọ naghị ewepụ ohere maka ojiji.
Ugbu a ịga n'ihu na Realme GT, ihe ọhụụ dị mkpa mgbe ị na-eweta ama ama iji rụọ n'ọnọdụ ọ bụla. Ihuenyo ahụ nwere usoro dum, naanị 4% bezel a na-ahụ anya, igwefoto, dị ka nke Realme Narz0 30 ahụ, bụ ụdị nke nwere oghere, bi n'akụkụ aka ekpe.
Ma Realme Narzo 30 na Realme GT dị Ogologo oge, ebuputara onye mbụ n’ime ha na Mee 2020. A mara ọkwa Realme GT na mbido Machị dị ka ekwentị egwuregwu, nke kachasị maka ndị chọrọ ike n’ego asọmpi n’ezie.
Ọnụahịa nke Realme Narzo 30 5G bụ ihe dị ka euro 219, ọ bụ ezie na ọ ga-agbadata nke ukwuu ebe ọ dị na ahịa ihe karịrị otu afọ. Ihe dị mma bụ na ọ bụ ọnụ ọgụgụ 5G na ọnụ ala dị ala nke euro 300, ịbụ nhọrọ dị oke ọnụ maka onye ọrụ ọ bụla na-achọ ọnụ ọnụahịa dị mma.
Realme GT n’aka nke ọzọ nwere ọtụtụ ọnụahịa Dabere na nhazi ahọpụtara, ma jiri 6, 8 ma ọ bụ 12 GB nke Ram na 128/256 GB nke nchekwa. Modelsdị ndị ebuputara na mbụ bụ 8/128 GB maka euro 369 na 12/256 GB maka euro 499.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Realme Narzo 30 5G vs Realme GT 5G: nyocha doro anya
Kospet Optimus 2: mmalite, atụmatụ na nnweta